ဝင်ျကပါထဲက သရဲစံအိမျ [Completed] - ဝင်ျကပါ (နိဒါနျး) - Wattpad
ဝင်ျကပါထဲက သရဲစံအိမျ [Completed]
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁)
ဝင်ျကပါ ( မှတျတမျး - ၂)
ဝင်ျကပါ ( မှတျတမျး - ၃ )
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၄)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၅)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၆)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၇)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၈)
ဝင်ျကပါ ( မှတျတမျး - ၉)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၀)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၁)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၂)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၃)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၄)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၅)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၆)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၇)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၈)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၁၉)
ဝင်ျကပါ (မှတျတမျး - ၂၀)
ဝင်ျကပါ ( နိဂုံး - အစ)
ဝင်ျကပါ (နိဂုံး - အဆုံး)
Surprise ? Season3?
မကွောကျတတျသူမြား ဖတျပါ 😌😌 ငိုခငျြသူမြား နှငျ့​ မရယျ​ခငျြ​သူမြားမဖတျ​ရ🙊🙊 ✌Kim Namjoon ✌Kim Seok Jin ✌Min Yoongi ✌Jung Hoseok ✌Park Jimin ✌Kim Tae Hyung ✌Jeon Jung Kook အခှငျ့အလမျးတဈရပျကနေ ရညျရှယျခကျြရှိရှိဖွငျ့​သရဲစံအိမျအတှငျးသို...
#bts #comedy #hope #horror #jimin #jin #joon #kook #myanmar #suga #tae
13.6K 1.9K 944
​မ​ကြောက်​တတ်​သူများ ဖတ်​ပါ 🙈🙈
ငိုချင်​သူများ နှင့်​မရယ်​ချင်​သူများ မဖတ်​ရ 🙊🙊
မာယာများနဲ့ သရဲစံအိမ်​ဆိုတဲ့ စံအိမ်​ကြီး အတွင်း ၀ယ်​ဖြစ်​ပျက်​တွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှ အ​ကြောင်းအရာ​တွေ
Jung Hoseok ရဲ့ အိမ်​မက်​တွေတဲ့ ။
ဒါဟာ အဆုံးသတ်​တခု ဖြစ်​ခဲ့တာလား ။
ဒါဟာ အဆုံးသတ်​တခု မဟုတ်​ခဲ့ဘူး။
သင်​တကယ်​လိုက်​ပါ စီး​မျောဖို့ အသင့်​ဖြစ်​ပြီလား ။
မိုးသည်းထန်​စွာရွာသွန်းရင်း လက်​ခနဲ ဖြစ်​သွား​သော လျှပ်​စီး​ကြောင့်​အ​မှောင်​ထဲက​နေ ၀င်းကနဲ လင်းသွား​သော ထိုစံအိမ်​ရဲ့ ပုံစံက အ​မှောင်​ထဲမှ အဖြူ​ပျက်ပျက် အေ​ရာင်​ကြီးတခုကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မီး​မှောင်း ထိုး​ပြလိုက်​သလိုမျိုး ၊ မသတီစရာ မ​ကောင်းဆိုးဝါး သဏ္ဍာန်​ကြီးက ထင်းကနဲ ။
မိုးသံ​လေသံ၊ သစ်​ပင်​တွေ လှုပ်​ယိမ်း​နေကြသံ ကလွဲ၍ အရာတိုင်းဟာ တိတ်​ဆိတ်​လျက်​။ ဘယ်​အရာမှ လှုပ်​ရှားသက်​၀င်​ခြင်းမရှိ ။
ဒါ​ပေမဲ့ မသင်္ကာစရာ တခုက​တော့
ဖြူလွလွအရိပ်​သဏ္ဍာန်​တခုက​လေနဲ့အတူ တ​ရွေ့​ရွေ့ လှုပ်​ရှားရင်းမှ ထိုစံအိမ်​နားသို့​ရောက်​လာ​သောအခါ ကျွီကနဲ ခပ်​ဖြေး​ဖြေး တံခါးပွင့်​သံနဲ့အတူ အိမ်​အတွင်း ၀င်​ရောက်​ပျောက်​ကွယ်​သွားတာက​တော့ ထူးခြားမှုတခုဟု မှတ်​ယူချင်​စရာဖြစ်​သွား​ပေမဲ့ ထိုခဏအတွင်း​သက်​၀င်​လှုပ်​ရှားမှုပြီး​နောက်​တော့ ဘာမှ မဖြစ်​ပျက်​ခဲ့သလို အရာတိုင်းဟာ ပြန်​လည်​ငြိမ်​သက်​သွားတာကလဲ ထူးဆန်းလွန်းလှသည်​။